Turkiga oo aag cusub oo dagaal ka furay Waqooyiga Suuriya – STAR FM SOMALIA
Turkiga oo aag cusub oo dagaal ka furay Waqooyiga Suuriya
Turkiga ayaa Taangiyo iyo madaafiicda loo yaqaano Artillery u diray waqooyiga Suuriya, kadib markii uu ku dhawaaqay howl gal ka dhan ah Kooxda Daacish.
Taangiyadan ayaa ka tallaabaday magaalada Kilis oo ku taal xuduuda Turkiga iyo Suuriya, iyadoo wariyeyaasha ay soo sheegeen inay maqlayeen madaafiic ay ridayeen.
Qiic iyo uuro ayaa ka baxayay dhulka Suuriya ee ay duqeynta la dhacayeen Taangiyadan, iyadoo ay ka bilowdeen deegaanada dhaca xuduuda barakac ballaaran.
Xoogaga mucaaradka Suuriya oo taageero ka helaya Milateriga Turkiga ayaa sheegay inay qabsadeen illaa 8 tuulo oo ay gacanta ku hayeen Daacish
Warbaahinta Turkiga ayaa sheegaya in madaafiicda loo yaqaano Artillery-ga lagu duqeynayay goobaha Daacish kaga sugan yihiin waqooyiga Suuriya.
Fara gelinta cusub ee uu Turkiga ku sameeyay Suuriya ayaa waxaa cambaareeyay dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Faransiiska ayaa sheegay in uusan raalli ka aheyn.
Diyaaraddii ugu horeysay oo rakaab ka qaaday Mareykanka, kana dejisay Cuba (Daawo Sawirada)